Laa'os keessatti hidhaan lagaa cabee balaan guddaan mudate. - NuuralHudaa
Home/Odeeyfannoo/Eeshiyaa/Laa’os keessatti hidhaan lagaa cabee balaan guddaan mudate.
Laa’os keessatti hidhaan lagaa cabee balaan guddaan mudate.
Kibba Laa’os keessatti wixata dabre hidhi lagaa elektrikii maddisiisu cabuun, naannoolee biyyattii hidha kanaa gaditti argaman keessatti lolaa hamaa uume. Galaanaa uumame kanaan lafti qonnaa fi gandoonni heddu guutumatti kan liqimfaman yoo tahu, waraanni biyyattii ummata kana baraaruuf carraaqqii kan godhaa jiru tahuu gabaasne arganne ni mul’isa.
Mootummaan Laa’os ibsa guyyaa hardhaa baaseen, “bishaan hir’ataa dhufe hordofuun dhoqqee uumameen akkasumas rooba gannaatiin walqabatee, namoota baraaruuf imalli bidiruudhaan godhamu rakkisaa ta’ee jira” jedhe. Mootummaan biyyattii akka jedhutti hanga ammaatti reeffi namoota 29 kan argame yoo tahu, namoonni 1100 ol tahan ammoo achi buuteen isaanii dhabamuu beeksise.
Lolaa kanaan biyya ollaa Laa’os kan taate Kaamboodiyaa keessattis namoonni kumaatamaan lakkaahaman qeyee isaanii irraa baqatanii jiru. Haata’u malee Kaamboodiyaa keessatti lubbuu namaa irratti balaan dhaqqabe kan hin jirre tahuu gabaasni arganne ni ibsa.
Sababni balaa kanaa kan hin ibsamin tahus, qondaaltonni Laa’os tokko tokko sababni balaa kanaa qulqullina ijaarsa hidhaa waliin kan walqabate tahu mala jechuu isaanii gabaasni Aljaziiraa ni addeessa.
Villagers evacuate after the Xepian-Xe Nam Noy hydropower dam collapsed in Attapeu province, Laos July 24, 2018. ABC Laos News/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. – RC129426A320
Villagers carry their belonging as they evacuate after the Xepian-Xe Nam Noy hydropower dam collapsed in Attapeu province, Laos July 24, 2018. REUTERS/Stringer – RC17F072F510
balaa lolaa Laa'os
May 31, 2020 sa;aa 6:20 pm Update tahe